महाशिलाको बालाकोटमा प्याराग्लाइडिङ परीक्षण उडान सफल – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/महाशिलाको बालाकोटमा प्याराग्लाइडिङ परीक्षण उडान सफल
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा पहिलो पटक गरिएको प्याराग्लाइडिङ परीक्षण उडान सफल भएको छ । महाशिलाको वडा नम्बर ३ बालाकोटको मुसुरबारी डाँडाबाट परीक्षण उडान सफल भएको हो । दिउँसो साढे १ बजे गरिएको परीक्षण उडान ४५ मिनेटसम्म उडान भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
मुसुरबारी डाँडाबाट उडान गरिएको प्याराग्लाइडिङ भिरकोट नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित सोरेक मैदानमा अवतरण गरिएको थियो । भिरकोट नगरपालिका वडा नं. ९ स्याङ्जाका वडाध्यक्ष भिम गुरुङ र महाशिला गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष रोशन गुरुङको पहलमा प्याराग्लाइडिङ परीक्षण उडान भएको थियो ।
परीक्षण उडानमा भिरकोट नगरपालिका वडा नं. ५ का वडासदस्य तथा प्याराग्लाइडिङ पाइलट नवीन थापा उडेका थिए । प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएपछि स्थानीय खुशी भएका छन् ।
उक्त अवसरमा पोखराबाट गएका कलाकारहरूले कन्सर्टसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका थिए ।
प्याराग्लाइडिङ उडान सम्बन्धमा भिरकोट नगरपालिका वडा नं. ९ स्याङ्जाका वडाध्यक्ष भीम गुरुङ र भिरकोट नगरपालिका वडा नं. ५ सदस्य तथा पाईलट नवीन थापा मगरसहित संयोजक लालप्रसाद गुरूङले नौ महिनादेखि पहल र छलफल गर्दै आएका थिए ।
अब प्याराग्लाइडिङ संघ र पाइलटसंग छलफल गरेर सोरेकदेखि बालाकोट मुसुरबारी डाडाँमा अवतरण गरिने र पुनः सोरेक मैदानसम्म उडान गरिने संयोजक लालप्रसाद गुरूङले जानकारी दिए ।
स्थानीय युवा विमल रिजालले यो क्षेत्र प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । रिजालले प्याराग्लाइडिङ मात्र नभएर यस क्षेत्रमा पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने अन्य विभिन्न सम्भावना रहेको बताए ।
वडाध्यक्ष रोशन गुरुङले अब सरकारबाट अनुमति लिएर प्याराग्लाइडिङ उडानको व्यवसाय अघि बढाउने योजना रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका साथै पिकनिक स्थलका रूपमा विस्तार गरिने बताए ।
माघ ३ मा विरोध प्रदर्शन गर्दै कांग्रेस